८० प्रतिशत मानिसलाई मेरुदण्डको समस्या, कसरी थाहा पाउने र जोगिने ? « Janaboli
८० प्रतिशत मानिसलाई मेरुदण्डको समस्या, कसरी थाहा पाउने र जोगिने ?
काठमाडौं । स्पाइन सर्जरी भनेको सामान्यतः मेरुदण्डको शल्यक्रिया हो । मेरुदण्डसँग सम्बन्धित समस्या हिजोआज धेरैलाई देखिन्छ । त्यसमा पनि गर्धन र ढाड दुख्ने समस्या धेरै नै आएको छ । यस्ता समस्या रोगले मात्र नभई खानपान र बदलिँदो जीवनशैली कारण पनि आएको हो । बिरामी मध्ये ८० प्रतिशत मानिसमा गर्धन र ढाड दुख्ने समस्या लिएर आउनेको गरेका मेरुदण्ड स्पाइन सर्जन डा. गौरवराज ढकालले क्यानडानेपाललाई जानकारी दिए ।
लक्षण : स्पाइनको समस्या मुख्यतया ढाड दुख्ने, गर्दन दुख्नेजस्ता समस्याबाट सुरु हुन्छ । कसैलाई एकासी दुख्छ कसैलाई विस्तारै दुख्छ यदि त्यो दुखाई बढ्दै गयो भने दुखाइ ढाड र गर्दनबाट हात र खुट्टामा पुग्छ । जुन रेडियटिङ पेन हुन्छ । नशा च्यापिएर हातहरु झमझमाउने, खुट्टा झमझमाउने, कमजोरीपन हुने, हिँड्न गाह्रो हुने, खुट्टा लुलो हुने, शरीरभारी हुने दुखाइ हात खुट्टामा सरेको छ या छैन भन्ने लक्षण हुन्छ । ट्युमर क्यान्सर भएको छ भने तौल कम हुँदै जाने लक्षण देखिन्छ ।
समस्या भइहालेमा के गर्ने : ढाड र गर्दन दुखेमा ८० प्रतिशत मानिसको समस्या सामान्य उपचारले ८-१० दिनमा कम हुन्छ । तर, त्यसको लागि स्पाइनको चिकित्सकलाई भेटेर जाँच गर्नुपर्छ । स्पाइन सर्जनले सामान्य जाँच गरेर एक्सरे गर्छ त्यो एक्सरेमा सबै सामान्य भएमा मेकानिकल ब्याक पेन र पोस्चर गर्न सम्बन्धित कुराहरु नमिलेको कारणले ढाड दुख्ने समस्या आएको बुझिन्छ । त्यसमा साधारण औषधि र दुई हप्ता १० दिन व्यायाम तथा फिजियोथेरापीले निको हुन्छ । यस्ता सिकेको कुरा जीवनमा लागू गरेमा यो समस्या बिस्तारै हराउँछ ।
मेरुदण्डको अप्रेशन गर्न जोखिम हुन्छ यो सत्य हो : मेरुदण्ड भनेको संवेदनसील अंग हो । यो संक्रमण तथा स्पाइनको क्यान्सरका कारणले पनि हुनसक्छ । यसलाई पर्याप्त परीक्षण र जाँचको आवश्यकता पर्छ । त्यसपछि मात्र कस्तो शल्यक्रिया गर्ने निचोड निस्कन्छ । टाउकोबाट तल पुच्छरसम्मको भाग नै स्पाइन भनिन्छ स्पाइनको कम्पोनेट भनेको भित्रको मुल नशा जसलाई स्पाइन कर्ड भनिन्छ । स्पाइनल कर्डबाट हाँगाहरु निस्कन्छ जसलाई नवहरु भनिन्छ । स्पाइल नव र कर्डलाई वरिपरि हड्डीले छेकेको हुन्छ, जसलाई बोन र भटिब ब्रा भनिन्छ माशपेसीहरु पुरै भाग मासु हड्डी नव स्पाइल कर्ड भनिन्छ कुनै पनि भाग ड्यामेज भयो भने प्यारालाइसीस हुने खतरा धेरै छन् । यदि सर्जरी गर्दा ध्यानपूर्वक सर्जरी गरिएन भने यो कनै कम्पिकेशन भएमा हात खुट्टा नचल्लने या हात खुट्टाको कुनै पाट नै नचल्ले हुन्छ । त्यसैले पनि यो जटिल हुन्छ ।
स्पाइनको समस्या कुन उमेरकोलाई हुन्छ : स्पाइनको समस्या युवादेखि बुढासम्म हन्छ । जस्तो ढाड बाङ्गिने समस्या जन्मजात पनि हुन पनि सक्छ । यो १० देखि २० वर्षसम्म या २० देखि ४० वर्ष भन्दा माथिकोलाई पनि हुन सक्छ । स्पाइनको ट्यूमर स्पाइनको क्यान्सर ४० वर्ष भन्दा माथिकोलाई धेरै देखिन्छ । ढाड दुख्ने गर्दन दुख्नेमा अफिसमा काम मानिसहरुलाई बढि देखिएको छ ।
समाधान कसरी गर्ने : विरामी आउँदा सबै भन्दा पहिल उसकोबारेमा हिस्ट्री लिने गरिन्छ ।यो के कारणले दुखेको हो पत्ता लगाउनु जरुरी हुन्छ । एक्सरे सिटीस्क्यान, एमाराइ गर्ने । सबै बिरामीको एमाराइ गर्नै पर्छ भन्ने हुँदैन ।
ध्यान दिनुपर्ने कुरा : विहान सकेसम्म १ घण्टा व्यायाम गर्ने, जिम जाने वा दौड्ने गर्नुपर्छ । अफिसमा काम गर्दा लामो समयसम्म एउटै पोजिसनमा बस्नु हुँदैन । एकछिन् उठ्ने र हिँडडुल गर्ने । मोटरसाइकल चालक, बस चालकहरुले पछाडिको मरुदण्डको वरिपरी मांशपेशी हुन्छ त्यसलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने ज्ञान राख्नुपर्छ । त्यस्तै फिजियोथेरापी वा व्यायाम गर्ने बानी बसालेमा यो समस्या ठीक हुन्छ ।
सुझव : बालबालिकालाई पढाइमा मात्र फोकस नगरी दिनको १ घण्टा शरीरलाई एक्ससाइज गर्ने खेल काम गराउनु पर्छ । नियमित एक्सजाइज गर्ने गर्नुस् । स्पाइनको समस्या छ भनेर बस्नु भन्दा समयमै अस्पतालमा गएर जँचाउनु राम्रो हुन्छ । चुरोटको सेवन नगर्ने जस्ले मेरुदण्डमा असर गर्छ । जीवशैलीमा परिवर्तन गर्ने ।
विशेषज्ञ सहित निःशुल्क स्वास्थ्य शिबिर सम्पन्न, ५५४ जनाले गराए निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच
काठमाडौं । बालुवाखानी हेल्थ केयर सेन्टर प्रालिको आयोजना बुढानिलकष्ठ न.पा.१०को समन्वयमा भएको बृहत निःशुल्क स्वास्थय
चिकित्सक बन्नेहरुका लागि सरकारले लगानी गर्ने
काठमाडौं । जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकाले उच्चशिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहमा छात्रवृत्ति प्रदान
चिनियाँ राजदुतले भनिन् : नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा चीन सरकारको सहयोग निरन्तर रहन्छ
काठमाडौं । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ याङ्छीले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा चीन सरकारको सहयोग निरन्तर
घरआँगनमा स्वास्थ्य सेवा पाउन थालेपछि सर्वसाधारण दंग
काठमाडौं । तनहुँको भीमाद नगरपालिका–८ भानुमतिस्थित हिमालय माध्यमिक विद्यालयमा आयोजित दुई दिने स्वास्थ्य शिविरबाट ७००